Booliis ku garaacay nin Soomaali ah Minneapolis oo maxkamadi ay dambi ku heshay maanta -
MINNEAPOLIS, (Tusmo Times) – Nin kamid ahaan jiray booliska magaalada Minneapolis ayaa waxaa maanta ay maxkamad ku taalada degmadda Hennepin ee Magaalada Minnneapolis ay ku heshay dambi la xiriira garaacitaan uu u geystay nin Soomaali ah.
Xeerbeegta degamadda Hennepin ayaa maanta oo Isniin ah dembi ku heshay Christopher Reiter oo ahaa sarkaal hore oo bilayska magaalada Minneapolis ka tirsanaan jiray. Dambiga culus ee uu galay ninkan booliiska ahaan jiray ayaa waxa uu ku sameeyay shaqsi Soomaali ah uu wajiga ka laaday, wakhti booliska loogu yeeray arrin rabshad qoys la xiriirta.
Christopher Reiter waxaa lagu helay dembi adag oo la xiriira dhaawac xun oo uu u geystay Maxamed Cusmaan bishii May 2016. Ninkan booliiska ahaan jiray dhaawac uu gaarsiiyey Maxamed Cusmaan waxa uu sababay dhaawac maskaxda ah.
Haddaba Christopher Reiter oo isagu ka jawaabayay wicitaan ay booliiska soo wacday haweeney Soomaali ah oo sheegtay in uu ninkeedu garaacay ayaa isaga oo maraya dhinaca koonfureed ee magaalada Minneapolis wuxuu ogaaday in Maxamed Cusmaan oo ah ninka lagu tuhunsan yahay inuu geystay dambiga garaacitaanka haweeneyda Soomaaliyeed uu ku jiray baabuur ku dhow, kadibna gaariigii ayuu istaajiyey, isaga oo isla markaasna u gacan qaaday Maxamed Cusmaan oo wajiga ka laaday.
Ninka booliiska ahaa markii uu wajiga ku dhuftay Maxamed Cusmaan ayaa waxa ay sababtay in uu Maxamed Cusmaan dhulka ku dhaco, miyir-beel iyo dhiig-bax badana la kulma. Kadibna Ambalaaska ayaa u qaaday isbitaalka, dhaawac soo gaaray awgiis.
Haddaba waxaan dib idiinku soo sheegi doonaa inta sanno ee lagu xukumo ninkan kamid ahaan jiray booliska magaalada Minneapolis ee dembiga uu u geystay Maxamed Cusmaan maanta lagu helay.
Xigashadda sawirka: Hennepin County iyo Carston Heefner via KARE 11 News